(1)Window NTLDR Missing Error ပြသနာ ဖြေရှင်းနည်း (2)Window NTLDR is Missing ~ ITmanHOME
06:39 နည်းပညာ2comments
(1)Window NTLDR Missing Error ပြသနာ ဖြေရှင်းနည်း (2)Window NTLDR is Missing
NTLDR Missing Error ပြသနာဖြေရှင်းနည်း
NTLDR Missing Error ကို ကွန်ပျုတာ အသုံးပြုတဲ့သူ တော်တော်များများတွေ့ဖူးကြမှာပါ..
window မတက်တော့ပဲ အောက်က ပုံလေးလို ဖြစ်နေတာကို မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်..
အဲလိုကြုံတွေ့ရင် ဖြေရှင်းတာကို မသိရင် window ပြန်တင်ကြတာများပါတယ်...
ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဆိုတော့ window မှာရှိတဲ့ ntldr နဲ့ ntdetect.com ဆိုတဲ့
ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ပျက်သွားလို့ window မတက်တော့တာပါ..အဲဒီဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို
ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ window ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန် အသုံးပြုနိူင်ပါပြီ...
ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာကို ကျနော် ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ...
အဲဒီ error တက်ပြီဆိုရင်
သူပြောထားတဲ့ အတိုင်း restart ချလိုက်ပါ..
ပြိးရင် window တင်ထားတုန်းက window CD ကိုထည့်ပြီး ၀င်းဒိုးတင်တဲ့ အတိုင်း repair ထိရောက်အောင်သွားပါ.
အဲဒီထဲကိုရောက်ရင် C partition ကိုသွားမှာဖြစ်လို့ C ကို 1 လို့သတ်မှတ်ပါတယ် 1 ကိုနှိပ်ပြိးဝင်လိုက်ပါ..
administrator password တောင်းပါလိမ့်မယ် မရှိရင်တော့ Enter ခေါက်ပြီးဝင်လိုက်ပါ...
CD (or) DVD Drive ရှိတဲ့နေရာကို သွားရမှာပါ ရောက်နေတာက C ထဲမှာပါ Drive ကို D ပေးထားရင် D ကိုသွားရမှာပါ.
တကယ်လို့ Drive ကို E ပေးထားရင်တော့ E ကိုသွားရမှာပါ...window ခွေထဲမှာရှိတဲ့
ntldr နဲ့ ntdetect.com ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို C ထဲပြန်ထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ...
အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ c:\_>dir D လို့ရေးလိုက်ရင် window ခွေထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကျလာပါလိမ့်မယ်.
အဲဒီထဲက i386 ထဲကနေယူရမှာပါ ပထမ ntldr ကိုC ထဲကိုထည့်ရမယ့် command က copy D:\_i386\_ntldr C:\_ပါ
နောက်ထပ် ntdetect.com ကိုထည့်ရမယ့် command ကတော့ copy D:\_i386\_ntdetect.com C:\_ပါ..
အခုကျနော်ဆွေးနွေးတဲ့အထဲက အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ပြန်ပြောပါခင်ဗျာ မရှင်းတာရှိရင်လည်း မေးနိူင်ပါတယ်..အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..
Window NTLDR is Missing
Download link ISO Burner
18 August 2012 at 22:56 Reply
အစ်ကို comment ဖတ်ရတာ မရှင်းဘူး။
24 August 2012 at 19:18 Reply
Facebook comment များကို Copy ၍ တနေရာမှာ Paste ( notepad txt file or gtalk ) လုပ်ပြီးကြည့်ပေးမှ ကောင်းကောင်း မြင်ရပါတယ် အကို ဟီးဟီး :D